Aza mamafa fotsiny ny fampiharana, Alefaso ny rakitra rehetra an'ny App
Mila app iray aho mba hanampy amin'ny famafana ireo rindrambaiko apetrako amin'ny Mac aho mba hanamarinana azy ireo, ary mety handinika azy ireo, raha mety izany. Mandeha rindrambaiko vitsivitsy aho isan-kerinandro, ary tsy toy ny andro voalohan'ny fampiasana Mac, dia tsy mora tsotra izao intsony ny fametrahana fampiharana amin'ny fako. Amin'ny tranga maro dia misy ny rakitra, ny fandefasana, ny fanombohana, ary ny maro hafa izay nanaparitaka ny Mac teo amin'ny rindrambaiko. Ireo antontan-taratasy fanampiny rehetra ireo dia navela ho tavela raha toa ka mitarika ny fampihatra haingana indrindra ao amin'ny lahatahiry / fampiharana amin'ny fako.
Izany indrindra no tena mahafaly ahy amin'ny AppDelete avy amin'i Reggie Ashworth. Manao tsara izy ary tsy manaparitaka ny zavatra ao amin'ny Mac.
Esory ireo apps, widgets , plugins , safidim-pifandraisana , ary zavatra maro hafa.
Algorithm fikarohana fohy amin'ny fitadiavana rakitra mifandraika amin'izany.
Preview tanteraka alohan'ny famafana; fantatrao izay hitranga.
Ny fiarovana an-tserasera dia ahafahanao mitazona ny ankamantatra amin'ny famafana.
Ny fikarohana momba ny kamboty dia mahita rakitra an-tsoratra mifandraika amin'ny apps efa nopotehinao.
Mamoaka ny asa rehetra.
Miala tsy ho ela rehefa manindry fako kely.
Ny rafitra fanampiana mahantra.
Mila mpitarika tsara kokoa.
AppDelete dia fitaovana ilaina ahafahana manana, indrindra raha toa ianao ka miezaka mametraka sy manala ireo apps maro. Amin'ny ankapobeny, ny fisarihana fampiharana ho an'ny fako dia tsara ho an'ny fanesorana ny vatana mainty amin'ny app. Fa ity fomba ity dia mamela ireo bitsibitsoka vitsivitsy amin'ny endriky ny antontan-taratasim-ponenana sy ireo antontan-drakitra hafa ampiasain'ny rindrambaiko. Amin'ny toe-javatra sasany, dia mety misy ny alika miafina sisa tavela, apps kely izay mihazakazaka amin'ny loharanom-pihetseham-ponenana.
Ny fananana solosaina sasantsasany ary na ny daemons mihazakazaka aza dia tsy miteraka olana maro eo amin'ny Mac anao, fa rehefa mandeha ny fotoana, dia afaka manampy azy ireo, ary manomboka manana fiantraikany amin'ny fomba ataon'ny Mac anao, indrindra raha manana loharanom-panafatra Mac, toy ny habetsaky ny RAM .
Izany no mahatonga anao isaky ny afaka manao izany, dia tokony hampiasa ny fanamafisam-peo na fanitsiana tsy an-kery omen'ny mpandrindra app. Saingy matetika, ny mpandrindra dia tsy manelingelina ny fampidirana ny uninstaller, ary tsy mieritreritra mihitsy ny hanoratra torolàlana manaisotra. Any AppDelete no tonga lafatra.
AppDelete dia afaka mihazakazaka amin'ny fomba isan-karazany, anisan'izany ny varavarankely tsotra tratrany izay ahitanao ireo apps tianao halefa tanteraka amin'ny rafitrao. Raha vao notaterina ny app ny fanontana AppDelete dia alefa ny rakitra mifandraika aminy rehetra, anisan'izany ny rakitra main .app.
Ny singa tsirairay ao anatin'io lisitra io dia ahitana sora-baventy voamarina izay mamaritra ny singa dia hofafana; Afaka mamaha ny zavatra tianao hotazoninao ianao. Raha tsy azonao antoka na te hikaroka bebe kokoa, ny singa tsirairay dia hanana bokotra Info sy Display amin'ny bokotra Finder .
Ny bokotra info dia hampakatra ny mitovy amin'ny boaty Info Finder ho an'ny singa voafaritra. Azonao atao ny mijery ny toerana misy ilay toerana rehefa nampiasaina farany izy, ny fomba amam-panafahana ny rakitra sy ny tsipika hafa.
Ny fampisehoana amin'ny bokotra Finder dia mety ho tena ilaina kokoa indraindray. Efa nisy olana tamin'ny fampiharana ny app, ary rehefa avy nikaroka ny valinteny entin'ny Internet ianao dia toa namafa ny antontan-taratasin'ny fampiharana (ny .plist file) ny fifanarahana. Izay mitondra anao amin'ny fanontaniana manaraka: Ahoana ny fomba fijerinao ny tahiry .plist amin'ny app, ary afeno avy eo? Raha mijery ny lisitry ny AppDelete ianao amin'ny fampiharana, dia tokony ho afaka hamantatra ny rakitra .plist. Tsindrio ny bokotra finday ao amin'ny Finder mba hanokafana varavarankely finder iray ao amin'ny lahatahiry misy ny rakitra, ary alefao fotsiny ny rakitra .plist. Amin'ity tranga ity dia nampiasa AppDelete ianao mba hitady haingana ny rakitra ho an'ny fampiharana misimisy. Andao hiverina amin'ny fampiasana AppDelete araka ny nikasana.
AppDelete dia mitanisa ny rakitra fampifandraisana rehetra amin'ny app. Azonao atao ny mamakivaky ny lisitra ary mamafa izay rakitra tianao hotazonina, fa ny ampahany betsaka indrindra dia hitako fa tsara ny AppDelete raha ny solonanarana fotsiny no tena anisan'ny app.
Rehefa vonona ny hamita ny dingana fanesorana ianao, dia afaka manindry ny bokotra Delete, izay hamindra ny rakitra rehetra ao amin'ny fako.
Etsy ankilany, ny AppDelete dia ahitana ihany koa ny baiko manafoana; Raha mbola tsy mamafa ny fako ianao, dia azonao atao ny mampiasa ny baiko tsy sivana mba hamerenana ny app nesotra.
Fikirakirana ny Apps
Ny endri-javatra tena ilaina ao amin'ny AppDelete dia ny fiasan-drakitra Archive , izay miasa ho toy ny safidy hafa amin'ny fandefasana mahazatra. Rehefa misafidy Archi ianao, ny fampiharana voafantina sy ny rakitra mifandraika aminy dia halefa ao amin'ny format .zip ary voatahiry ao amin'ny toerana misy anao. Ny hakanton'ny safidy Archive dia ny daty mety amin'ny farany, azonao ampiasaina amin'ny AppDelete ny fanavaozana ny rindrambaiko avy amin'ny tahiry voatahiry.
Safidy iray hafa amin'ny AppDelete dia ny hampifandray ny rakitra rehetra ampiasaina amin'ny app amin'ny lisitry ny lahatsoratra. Ny lisitra dia ahitana ny anaran-dàlan'ny rakitra tsirairay ampiasain'ny app. Ity dia azo ampiasaina amin'ny famahana olana, na manala ireo rakitra, raha mila fanazavana ianao.
Hatramin'izao, nampiasa AppDelete ho toy ny uninstaller isika raha fantatsika ny fampiharana tiantsika hialana, fa ahoana raha toa ka miezaka fotsiny ny manadio ny solosainao / / fampiharana mba hahazoana efitrano ilaina ao amin'ny Mac anao? Izany no nidiran'ny Genius Search.
Ny Genius Search dia hijery ny lahatahiry / fampiharana an-tserasera, mitady izay app tsy nampiasainao nandritra ny enim-bolana farany. Toa toy ny hevitra tsara ho an'ny fanesorana ireo apps efa napetraka. Na izany aza, hitako ny lisitr'io vokatra io izay nampidirin'ireo apps efa nampiasako nandritra ny enim-bolana farany, anisan'izany ireo izay ampiasaiko amin'ny herinandro ary ny iray ampiasaiko isan'andro. Tsy azoko antoka hoe inona ilay olana, fa ny Genius Search dia miasa tsara mba hamoronana lisitr'ireo apps azo atao mba hanesorana; Aza manaiky fotsiny ny manafoana azy rehetra. Mila mandehandeha sy manara-maso tsara ny lisitra aloha ianao.
Raha toa ka nindrana ny apps amin'ny trosan'ny Mac anao ianao tamin'ny lasa tsy nampiasana AppDelete, dia misy ny fotoana tsara ahafahanao manana rakitsoratra vitsivitsy mipetraka. Ireo rakitra noforonina dia rakitra mifandraika amin'ny rindrambaiko izay navela hiverina rehefa nampiasa ny fomba tsotra hanesorana ny rindrambaiko ho an'ny fanesoana ianao. Amin'ny fangatahana ny Orphaned Search, ny AppDelete dia afaka mahita ireo rakitra rehetra tavela ao ambadiky izay tsy mampiasa intsony ny fampiasana azy, ary mamela anao hamafa azy ireo.
Misy mpitsoka tsy misy fialana vitsivitsy hafa ho an'ny Mac, anisan'izany ny AppCleaner, iTrash, ary AppZapper. Fa iray amin'ireo antony tiako ny AppDelete dia noho ny haingam-panatanterahana azy. Satria maika haingana dia tsy mila mihazakazaka foana aho, manara-maso ny Mac ho an'ny fametrahana apps na fanakanana ny fanavaozana ny rakitra, ary ireo teknika hafa ampiasaina hanaraha-maso ny apps sy ny rakitra ampiasain'ireo solosaina hafa manerantany.
Midika izany fa tsy misy fangatahana AppDelete amin'ny loharanon'ny Mac afa-tsy rehefa mampiasa ny app. Raha mitady tetika hafahafa ianao mba hanararaotra ity fahafaha-manao AppDelete ity tsy mila mihazakazaka ao ambadiky, nefa mbola manana fidirana haingana, ampidino fotsiny ny icono AppDelete ao amin'ny Dock. Azonao atao ny manintona ny fampiharana amin'ny appDelete icon, ary AppDelete dia halefa ny fampiharana voafantina efa vonona ho nofafana.
Koa mandehana; Andramo ny sasany amin'ireo demo demaosinao izay te hanandrana foana ianao saingy natahotra ny tsy afaka navoaka intsony; AppDelete dia hikarakara ny dingana fanesorana ho anao.
AppDelete dia $ 7.99. Misy ny demo.
Jereo ny safidy safidy hafa amin'ny Tom's Mac Software Picks .
GraphicConverter 10: Miaramila Sovietika ho an'ny fanodinana ny rakitra
Time Machine, ny backup software tokony tokony ampiasainao
Ahoana ny fampiasana iTunes amin'ny maha-radio Player Internet
ITunes 11: Aiza ny fanalahidin'ny radio amin'ny Internet?
Android App Marketing: Torohevitra ho an'ny Mpampiasa
Ahoana no fomba hanitsiana ireo fihenam-bidy amin'ny stereo Audio Equalizer
Ahoana ny famandrihana Snapchat amin'ny dikan-teny farany amin'ny App
AAC Plus Format: Inona Marina no ampiasaina?
Mifidy ny fanapaha-kevitry Camera
Ny Dock: Ny fampiharana ny Mac manontolo
Ahoana no hividianana karajia Giftflower Netflix
Famaritana ny hadisoana 'Data Data Access Accessible'
Inona ny RouterLogin.com?
Compaq Presario CQ61-420us 15.6-inch Laptop PC
Ny Suffering Free PC Game Download
Ny tranonkala Mobile vs. The Real Internet
Fantaro ny fomba hanovana ny APN Settings amin'ny findainao
21 Zavatra tsy fantatrareo momba Microsoft & Bill Gates
Ny 7 Best Powerline Network Adapters hividy amin'ny 2018
Torolàlana haingana amin'ny fampiasana baiko Sed amin'ny Linux
Ahoana no hiomanana amin'ny MINECON 2016!
Inona ny DOCX File?
Fintana eo amin'ny "display: none" sy "fahitana: miafina" ao amin'ny CSS
Ny Keyboards 7 tsara indrindra azonao hovidina tamin'ny 2018